उल्टो बाटोमा प्रदेश सरकार– महामारीका बेला अस्पताल विकास समिति भताभुंग
कोरोनाका बेला भद्रगोल
बुटवल | माघ २, २०७८
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को तेस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएका बेला त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ ।
प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूलाई बर्खास्त गरेर नेतृत्वविहीन बनाएपछि सरकारी अस्पतालहरू भूसको आगोसरी फैलिएको कोरोना रोकथाम र बिरामीको चापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै अलमलमा परेका छन् ।
कोभिडको उपचारका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव छ । सरकारको कामले कोभिड नियन्त्रणमा अड्चन पैदा भएको छ ।
गत शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समितिमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई हटाएको थियो ।
प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले २५ अस्पताल छन् । जसमा ३ साविक अञ्चल अस्पताल, ११ जिल्ला अस्पताल र ११ आयुर्वेद अस्पताल छन् ।
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिएका बेला सरकार उल्टो दिशामा हिँडेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट लुम्बिनी प्रदेश ‘इपिसेन्टर’ बन्दा बाँके र रूपन्देहीमा कोरोनाले भयावह रूप लिएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण सिर्जित संकटबीच जनता रोग र भोकविरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेका बेला सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अस्पताल विकास समितिलाई रित्तो बनाउने काम गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले बताए ।
भट्टराईले भने, ‘कोरोना फैलिन थालेपछि हामीले कोभिड आईसीयू बेड थप्दै थियौं । दोस्रो लहरमा जस्तो अक्सिजनको अभाव नहोस् भनेर कोभिड बेडहरूमा पाइपलाइनबाट अक्सिजन पुर्‍याउने काम प्रभावकारी रूपमा हुँदै थियो । एकाएक मलाई बर्खास्त गरियो । केही छैन । तर, जनतालाई बचाउनुपर्ने बेलामा विकास समिति खारेजले अस्पतालका डाक्टरहरूलाई काम गर्न असहज हुन्छ ।’
६ माघ २०७६ मा तत्कालीन सरकारले भट्टराईलाई तीन वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमण तीव्र छ । प्रदेशमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् । प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमणको लक्षण देखिएर आएका १०० जनाको जाँच गर्दा ३० जनामा पोजेटिभ देखिएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालले बिरामीको चाप तीव्र रहेको बताए । अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा २०० जना कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि आउन थालेका छन् ।
जसमध्ये अहिलेसम्म धेरैलाई अक्सिजन चाहिने अवस्थामा नरहेकाले तत्कालै अप्ठ्यारो नभए पनि संक्रमण झनै बढ्न थालेपछि अवस्था गाह्रो हुन सक्ने मेसु ढकालले बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा अस्पतालमा अध्यक्ष र पदाधिकारी नभएर कोरोना रोकथामको कामलाई असर नपर्ने दाबी गर्छन् ।
यद्यपि, व्यवस्थापनको कार्यमा भने केही समस्या भएको उनको बुझाइ छ । शर्माले छिट्टै सबै अस्पतालमा नयाँ विकास समितिको नेतृत्व दिन प्रदेश सरकार तयारीमा रहेको बताए ।
यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्टहरू सबैको राम्रो व्यवस्थापन गरिने सरकारको उनको भनाइ छ ।
सीमा नाका भद्रगोल
भारतबाट संक्रमित भएर आएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराखेर सिधै घर जाँदा संक्रमण झनै फैलिएको छ । नेपाल–भारत सीमा नाका बेलहिया (सुनौली) मा चेकजाँचमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित बनेका छन् । त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने ठूला चारवटा नाका छन् । ती सबै अस्तव्यस्त र भद्रगोल छन् । संक्रमण रोकथाम भनेर हतारमा विद्यालय बन्द गरेको सरकारको उपस्थिति सीमा नाकामा प्रभावकारी देखिँदैन ।
नाकामा पर्याप्त परीक्षण र पूर्वतयारी नै छैन । संक्रमित सिधै सार्वजनिक गाडी चढेर घर जान्छन् । जसले गर्दा संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र छ । अहिले दैनिक लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरेर सिधै घर गएका छन् ।
खोप अझै ४५ प्रतिशतलाई बाँकी
लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ४५ प्रतिशत जनसंख्या कोभिड विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । खोपको गति सुस्त छ । सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप नदिँदै सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन कठिन हुने देखिएको छ । दुवै खोप लगाउन नपाएकाहरू सार्वजनिक सेवा लिनबाट बञ्चित हुन सक्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनीमा १२ वर्षमाथिको जनसंख्यामा ३९ लाख ६७ हजार छ । जसमध्ये १९ लाख ३० हजारले मात्र खोप दुवै डोज खोप लगाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । हालसम्म पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या करीब ३० लाख पुगेको छ ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । केही स्थानीय तहले उमेर समूह अनुसार बालबालिका बाहेक अन्यलाई खोपका दुवै मात्रा पूरा गरेका छन् । लुम्बिनीमा १२ जिल्ला छन् ।
खोप लगाएकाहरू पनि संक्रमित
प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांश खोप लगाएकाहरू रहेका भेटिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक, भेरी, राप्ती र भीम अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांश कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप लगाएकाहरू हुन् ।
खोप लगाएका संक्रमितहरू प्रशस्तै रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नेत्र रानाले बताए ।
‘अहिले अस्पतालमा एक गर्भवतीसहित १० जना कोरोनाका संक्रमितहरू भर्ना हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘भर्ना भएका संक्रमितमध्ये ८ जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनुभएको छ ।’
अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमध्ये अहिले कुनै पनि संक्रमितमा जटिल समस्या छैन ।
पालना भएन सरकारको ‘प्रोटोकल’
सरकारले ठूलो सभा र कार्यक्रम गर्न भनेको छ । प्रायः सबैजसो ठाउँमा सरकारको निर्देशन पालना भएको छैन ।
२५ जनाभन्दा बढी भेला नगर्न भने पनि संघ संस्थाका कार्यक्रम माघी पर्वमा सयौं मानिसहरू जम्मा भएर कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।
जसलाई रोक्न प्रशासन उदासीन देखिन्छ ।
अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी, कसरी लिने ?
तुलसीपुरको मतगणना अन्तिम चरणमा, एमालेको अग्रता कायमै
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जम्मा ७४ हजार ३३६ मत खसेकामा आज बिहान ७ बजेसम्म ७१ हजार १६६ मत गणना सकिएको छ । अब तीन हजार १७० मत गन्न बाँकी छ । ...
भरतपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित रेनु दाहालले बुधबार (आज) बिहान पदभार ग्रहण गरेकी छिन् । पदभार ग्रहण गर्दै दाहालले २ निर्णय गरेकी छिन् । उनले दोस्रो कार्यकालको पहिलो निर्णयमा अब भरत...
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मंसिर या फागुमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने भन्दै अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट कांग्रेसको लोकप्रियता बढेकाले जनतालाई...
पोखराको मेयरमा निर्वाचित भएपछि आचार्यले भने : ठूलो सङ्ख्यामा मत बदर नभएको भए मतान्तर अझै बढ्थ्यो
पोखरेलीको जीवनयापन सहज र सरल बनाउने कार्यक्रम ल्याउँछौँ : आचार्य पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्यले महानगरबाट सुशासनको प्रत्याभुत हुने गरी सेवा प्रवाह गर्ने आफ्...
पुरानो हारको रोचक बदला : पहिले जोसँग हारे, यसपालि उसैलाई हराए !
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको मेयरमा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका चित्रबहादुर कार्कीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार फणिन्द्र शर्मालाई २ हजार ७२७ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । कार्कीले १३ हजा...